Hello Nepal News » पोर्चुगलको टोलीमा रहेका बेला रोनाल्डोको घरमा चोरी !
पोर्चुगलको टोलीमा रहेका बेला रोनाल्डोको घरमा चोरी !
पोर्चुगलका सुपरस्टार क्रिस्टियनो रोनाल्डो राष्ट्रिय टोलीमा रहेका बेला उनको घरमा चोरी भएको छ । पोर्चुगिज मिडियाका अनुसार शुक्रबार पोर्चुगललस्थित मडेइरास्थित उनको घरमा चोरी भएको हो । स्थानीय प्रहरीले रोनाल्डोको घरमा चोरी भएको पुष्टि गर्दै छानबिन अघि बढाएको छ ।
प्रहरीले रोनाल्डोको घरमा जडान भएको सिसिटिभी फुटेज हेरेपछि उनको घरमा चोरी भएको पुष्टि भएको हो । चोरले रोनाल्डोको घरबाट रोनाल्डोसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण वस्तुहरू लिन खोजेको फुटेजबाट देखिएको छ । प्रहरीका अनुसार चोरले रोनाल्डोको घरबाट उनले हस्ताक्षर गरेका जर्सी, मेडल र केही मूल्यवान् वस्तु चोरेर लगेको जनाएको छ ।
चोर रोनाल्डोको घर परिसरमा रहेको ग्यारेजबाट भित्र छिरेरको फुटेजबाट देखिएको प्रहरीले जनाएको छ । फुटेजका आधारमा प्रहरीले चोरको पहिचान गरिसकेको बताएको छ । मडेइरामा रहेको घरमा रोनाल्डो आफ्ना परिवारसँग बिदा मनाउन जाने गर्छन् ।
सोही घरमा रोनाल्डोका भाइ र उनको परिवार बस्दै आएका छन् । तर, चोरी भएका बेला घरका सदस्य कोही पनि नरहेको बताइएको छ । रोनाल्डो अहिले पोर्चुगिज टोलीमा सामेल छन् । उनको टिमले यस साता युइएफ नेसन्स लिगमा दुई खेल खेल्दै छ । यसअघि स्पेनसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेलिसकेको छ ।
प्रकाशित मिति २३ आश्विन २०७७, शुक्रबार १६:१२